Ma i tusi kartaa sida loo hagaajiyo liiska Amazon?
Marka ay timaaddo ganacsigga maareynta macaamilka guuleysta, ganacsade kasta oo ganacsi waa inuu yaqaanaa sida loo yareeyo liiska Amazon. Maxaa loogu talagalay? Sababtoo ah haysashada liiska wax soo-saarka ee si fiican loo yiraahdo waa sida keliya ee lagu muujiyo dhagaystayaasha balaadhan ee dadka iibsadayaasha ah ee wax iibsanaya halkaas. Sidaa darteed, haddii aad taqaano fikradda asalka ah ee Mashruuca Muuqaalka Search (SEO), waa wax maskax ah in Amazon optimization uu ku qeexayo cilmi-baarista muhiimka ah sidoo kale. Waxyaabahaasi waa in dalabka wax soo saarka ah laga heli karo Amazon iyada oo loo marayo fursadaha raadinta oo keliya. Oo ka fikiraya in saxda saxda ah uu ka mid yahay qodobbada ugu muhiimsan ee raadinta halkan, macnaheedu waa in xulashada ereyada muhiimka ah aad u muhiim ah haddii aad rabto in aad maamusho dukaamo maraakiib ah oo runtii iibiya. Oo hoos ku qoran waxaan rabaa inaan ku tuso sida loo qaabeynayo liiska Amazon sida ugu macquulsan.
Laakiin ka hor inta aan bilaabin, halkan waa qaybaha ugu muhiimsan ee raadinta nalalka waxaan dooneynaa in lagu daboolo liiskaaga wax soo saarka Amazon - Cinwaanka Product, Points Points, iyo Product Sharaxaad. Feejignow, si kastaba ha ahaatee, in aan si xoogan kugula taliyo inaad haysato kickstart oo leh cilmi-baarista muhiimka ah adoo isticmaalaya Qorshaha Ku-Meel-Gaarka Google iyo wax kale. Isticmaalaan qalabkan habka loogu talagalay ee loogu talagalay mashruuca weyn ee raadinta aduunka waxaad awoodi doontaa inaad ku qorto sawirka weyn ee ereyadaada muhiimka ah iyo fahmida ereyada muhiimka ah ee ay isticmaalaan dukaamada raadinta ee ma aha oo keliya Amazon laakiin inta kale ee iibsadayaasha firfircoon raadinaya alaabta meelo kale ah (tusaale ahaan, eBay, Alibaba, iwm.). Markaad ogaatid aasaaska asaasiga ah, waxaan kugula talin lahaa inaad doorato mid ka mid ah qalabka cilmi baarista ee gaarka ah ee soo socda, sida Keywordtool.io, ScientificSeller, Scope, ama AMZ Tracker.
Sida Loo Beddelayo Amazon Listings
Markaad haysato liiska muhiimka ah ee keywords bartilmaameedkaaga diyaar u ah, waa waqtigii aad ku bilaabi lahayd meel sax ah. Hoos waxaan kuugu soo bandhigi doonaa sida aad ufixinayso liisaska Amazon ee sadexda qaybood ee ugu weyn - Cinwaanka Product, Points Points, iyo sidoo kale Sharaxaada Qalabka - si aad u socoto inaad hesho fursado dheeraad ah oo lagu muujiyo sare ee raadinta halkaas.
Talaabada Koowaad: Magaca Aaladda
Magaca Aalaa waxaa laga yaabaa inuu yahay meesha ugu fiican ee lagu daro inta badan ereyada bartilmaameedkaaga iyo jumlada raadinta caanka ah sida ugu macquulsan;
Dhererka ugu sarreeya ee Title Title waxaa loo oggol yahay in uu yimaado ilaa 200 characters muddo dheer;
Warqadda koowaad ee eray kasta oo soo socota waa in lagu dhameeystiraa;
Lambarrada waxaa loo oggol yahay kaliya xarfo kaliya ("sideed" ma samayn doonaan meel bannaan ah "8");
Midabka / cabbirka alaabtu waa inaan marnaba lagu darin Cinwaanka Tilmaamaha, haddii aysan ahayn faahfaahin dhab ah.
Talaabada 2aad: Dhibcaha Calaamadaha
Liiska Dhibcaha Calaamadda waxaa loola jeedaa sharaxaadda sifooyinka ugu muhiimsan iyo faa'iidooyinka alaabta nidaam nadiif ah oo cad oo keliya;
Waa in uu daboolaa macluumaadka ugu muhiimsan ee ku saabsan badeecadda, iyo weliba keywords keywords bartilmaameedka;
Waxaa lagugula talinayaa inaad daboosho khariidad kasta oo xog ah oo loogu talagalay in lagu soo galo sanduuqa.
Talaabada 3aad: Qeexitaanka alaabooyinka
Xaqiiqdii, waa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Liiska Warbixinta Maqalka;
Qeexitaanka Shaybaarka ayaa la filayaa inay wax ka qabato dhibcaha ugu weyn ee macaamiisha;
Waa inay noqoto mid hodan ku leh ereyada muhiimka ah, iyo sidoo kale ereyga muhiimka ah ee la xoojiyey;
Kaliya xog gaar ah oo daboolaya sifooyinka ugu muhiimsan iyo faa'iidooyinka waa la oggol yahay Source .